SomaliTalk.com » 2014 » January » 16
Home » Archive Maalinta January 16th, 2014
Baarlamaanka Soomaaliya: “Meeshu waa iska Bannaan tahay Nin walbow Wadaantaada ku Tuuro!!”
Shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahanada iyo dadka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa fajac iyo layaab waxaa ku noqotay wixii shalay ka dhacay xarunta Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya xilli uu u fariistay inuu cod u qaado in Wasiiradii hore ee Xukuumadii Saacid ay ka mid noqdaan Dowladda cusub ee uu soo dhisayo Ra’iisal Wasaare C/Weli Sheekh Axmed. Arrimaha sida weyn loola...
Garyaqaankii Guud ee Dowladdii hore oo ku Geeriyoodey Dalka Sacuudi Caraabiya.
Waxaa Dalka Sacuudiga Taariikhdu markey ahayd 15/1/2014 ku Geeriyoodey Allaha u NaxariisteeMarxuum Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo ahaa Garyaqaankii Guud Qaranka ee Dowladii Hore ee Kacaanka ka dib markii uu in Muddo ah ku Xanuunsanaa dalkaas Dr.Cabadiraxmaan Maxamed Cumar sidoo kale Dowladaas ka soo noqdey Agaasihiimihii Guud Wasaaradda Garsoorka , waxaana wax ka weydiiney Ing Sidow Xasan Mahadi...
Dowladda Federaalka oo markii ugu horeysey ka Hadashay Ciidamada Maraykanka ee ku Sugan Soomaaliya.
Iyadoo dhawaan Xukuumadda Washington ay shaaca ka qaadday in Tiro yar oo Ciidamadeeda ah ay ku sugan yihiin Gudaha Soomaaliya ayaa arrintaas markii u horeeyay waxaa dhankooda ka hadlay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi sii hayaha xilka Wasaaradda Gaashaandhigga ee Dawladda Federaalka Soomaaliya oo waraysi siiyey Warbaahinta ayaa sheegay in Maraykanka ay Soomaaliya ka...